बिजय शाही बारे महाबीर पुनले मुख खोले ! सुत्र होइन बास्तबिकता अर्कै रहेछ…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित) – Nepal Online Khabar
बिजय शाही बारे महाबीर पुनले मुख खोले ! सुत्र होइन बास्तबिकता अर्कै रहेछ…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
काठमाडौ : अन्ततः बिजय शाही बारे नेपाली बैज्ञानिक महाबीर पुनले मुख खोले ! सुत्र होइन बास्तबिकता अर्कै रहेछ (भिडियो) कालीकोटका विजय शाहीले मेमोरी किङ विधामा विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि निकै चर्चामा आएका छन्।
उनको चर्चा संगै बिरोध गर्नेले बिरोध पनि गरेका छन् । शाहीले एक मिनेटमा अगाडि र पछाडिबाट ७० शब्द सम्झिएर भनेपछी विश्व रेकर्ड राख्न सफल भएका क्षमतावान ब्यक्ती हुन् । काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा एक समारोह आयोजना गरेर शाहीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
फेरि उहीँ बिजय शाहीले चाइनिज भाषामा पनि आफ्नो क्षमता देखाउदा जो कोहि नै अचम्म हुने निश्चिति नै थियो तर उक्त भिडियोलाई कसैले यो झुटो हो…भनेपछी फेरिपनि धेरै मानिसको बिचमा बिजय शाहीलाई २९६ पेजको चाइनिज र इंग्लिस
किताब पढ्ने र लेख्ने सबै गर्न भाग्य न्याैपानेले लगाएका थिए । बिजयले उक्त किताब ४ मिनेटमा पढेर सकेका छन् र कहिल्यै नबिर्सने गरि सम्झन सक्ने सम्म भएका भनिएका थिए ।
Prevमलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्ड कु’टिएको विषयमा दूतावासले थाल्यो अनुसन्धान…हेर्नुहोस।
Nextजनताकाे हित चाहने र जनताकै पक्षमा बोल्ने रवि लामिछानेकाे बास्तविक यस्तो कथा…हेर्नुहाेस् ।(भिडियाे सहित)